《နွေးဦးမြို.ညပိုင်းသတင်းစာ》ဆဋ္ဌမ အကြိမ် မြောက် အာဆီယံ ဝင်ခြင်း အာဘော်ပိုင်း ကူမင်းမြို. တွင် ကျင်းပ မည် ဖြစ်ကြောင်း လှိုက်လဲစွာ ဂုဏ်ပြုကြောင်း - South-East Asia & South Asia Infoport
ယခုလက်ရှိရောက်နေသောနေရာ：ဟုမ်း-မ် > သတင်းအချက်အလက် > ပြခန်းလှုပ်ရှားမှု
《နွေးဦးမြို.ညပိုင်းသတင်းစာ》ဆဋ္ဌမ အကြိမ် မြောက် အာဆီယံ ဝင်ခြင်း အာဘော်ပိုင်း ကူမင်းမြို. တွင် ကျင်းပ မည် ဖြစ်ကြောင်း လှိုက်လဲစွာ ဂုဏ်ပြုကြောင်း
ဒီနှစ်ဇန်လ၁ရက်နေ. တရုတ်-အာဆီယံ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေးဇုံ အပြီး တည်ဆောက်ခဲ.ပါသည်။ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ စားသောက် သုံးစွဲသူ အများဆုံး ဧရိယာ အကြီးဆုံး ဖြစ် သောစီးပွားရေး ဈေးကြီး အတွက် တရုတ် နိုင်ငံ က ကော်ပိုရေးရှင် အာဆီယံ သို. ဘယ်လိုိ ဝင်ရောက် ၊ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်။​ေအာက်လ၂၆ရက်နေ. တရုတ်-အာဆီယံ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေးဇုံ တည်​ဆောက် ပြီးစီးမှု နောက်ပိုင်း စီးပွားရေး ကုန်သွယ်မှု ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်မှု အ​ေနအထား နှင်.ရင်ဆိုင ်ဖြေရှင်းမှု ဆိုသည်. ဆဋ္ဌမ အကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ဝင်ခြင်း အာဘော်ပိုင်း သည် ကူမင်း မြို. တွင် ကျင်းပါ တော.မည်။ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ပါရဂူ နှင်.အရာရှိ ၏ ဟောပြောခြင်း နှင်. အစည်းအ​ေဝး ပါဝင် သည်. လုပ်ငန်းရှင် နှင်.မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးမှု ကို လုပ်ဆောင်ခြင်း အဖြင်. သက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာ အတွက် လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ရရှိ နိုင်ပါမည်။
ယူနမ် ပြည်နယ် အာဆီယံ စီးပွားရေး ကုန်သွယ်မှု ပူးပေါင်း ကော်မတီဝင် မိတ်ဆက်ချက် အရ ဆဋ္ဌမ အကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ဝင်ခြင်း အာဘော်ပိုင်း သို.တက်ရောက် သည်.ဧည်.သည် တော် ၃၀၀ယောက် ကျော်ပါသည်။ အာဘော်ပိုင်း တွင် တက်ရောက်သူ များမှ တရုတ်-အာဆီယံ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေးဇုံအပြီး တည်ဆောက်မှု နောက်ပိုင်း ရင်ဆိုင်သော ခွင်.ကောင်း၊ စိန်ခေါ်မှု၊ ဉပဒေ ပတ်ဝန်းကျင ်နှင်. ပတ်သက ်၍ ဆွေးနွေး ၍ ယူဆချက် အတွေး အခေါ် ထုတ်ပြန်မည်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်က အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ် အတွင်း သဘောတူ စာချုပ် လက်မှက် ရေးထိုး၍ ဆွေးနွေး မှု ပြုလုပ် မည်။ စောစီးစွာ လာရောက် သတင်း ပို.သည်. ယူနမ် ပြည်နယ် လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက် က အဆင်.မြင်.တန်း အရာရှိ နှင်. ပါရဂူ များကူမင်း မြို. စုစည်း၍ စက်ရုံလုပ်ရုံ အတွက် ကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေးသတင်း များစွာ ပါရှိနိုင်ပါမည်၊ယူနမ် ပြည်နယ် ကစက်ရုံလုပ်ရုံ က နီးစပ်လို. ခွင်.ကောင်း ရရှိ နိုင် ပါမည် ဖြစ်ကြောင်းဟုယူဆပါသည်။
ဆဋ္ဌမ အကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ဝင်ခြင်း အာဘော်ပိုင်း ထောက်ကူ သည်.ဌာန များစွာ ရှိ ပါသည်။ တရုတ် ပြည်သူ ပြည်ပ ချစ်ကြည် ရင်းနှင်းမှု ကော်မတီ၊ တရုတ်-အဆီယံ ကော်မတီ၊ တရုတ် WTO လေ.လာရေး အဖွဲ.၊ ယူနမ် ပြည်နယ် ပြည်သူ. အစိုးရ ဌာန၊ ကူူမင်းမြို. ပြည်သူ. အစိုးရ ဌာနတို. ပါဝင် ်ပါမည်။ တရုတ် ပြည်သူ နိုင်ငံရေး စေ.စပ်ဆွေးနွေး ကောမတီ ကွမ်တုံ ရှိန်ချိမ်း မြို. ကောမတီ၊ WTO နှင်. တရုတ်-အာဆီယံ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေးဇုံ ဉပဒေကုန်သွယ်ရေး လေ.လာ​ရေး အဖွဲ. (ရှိန်ချိမ်း)၊ တရုတ် ဉပဒေ ကော်မတီ ကမ္ဘာ ဆိုင်ရာ ကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေး လေ.လာ ရေး အဖွဲ.၊ ယူနမ် ပြည်နယ် အရှေ.တောင်အာရှ တောင်အရှ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ပူးပေါင်း ကော်မတီ၊ ရှိန်ချိမ်း ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး အဖွဲ.၊ ရှိန်ချိမ်း ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး သတင်းစာ ဌာန ဦးစီး ကျင်းပ ပါမည်။တာဝန်် ထမ်းဆောင် ရန် ဌာနနှင်.အဖွဲ.အစည်း မှာယူနမ် ပြည်နယ် အရှေ.တောင်အာရှ တောင်အရှ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ပူးပေါင်း ကော်မတီ၊ ယူနမ် ပြည်နယ် ကော်ပိုရေးရှင် ပူပေါင်း ကော်မတီ ၊ ယူနမ် ပြည်နယ် စက်မှု် စီးပွားရေး ပူပေါင်း ကော်မတီ၊ ယူနမ် ပြည်နယ် အလတ် အငယ် စား ကော်ပိုရေးရှင် ဖွံ.ဖြိုးရေးပူပေါင်း ကော်မတီ ၊ယူနမ် ပြည်နယ် လုပ်ငန်းရှင် ပူပေါင်း ကော်မတီ၊ ရှိန်ချိမ်း ဇောက်ကျူး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အဖွဲ.တို.ဖြစ်ပါသည်။
မိတ်ဆက်ချက် အရ WTO နှင်. တရုတ်-အာဆီယံ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေးဇုံ ဥပဒေ ကူူူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး လေ.လာရေး အဖွဲ. (ရှိန်ချိမ်း) တို.ပူးပေါင်း ကျင်းပ ပြုလုပ် သည်. အာဆီယံ ဝင်ခြင်း အာဘော်ပိုင်း က ၂၀၀၅ခုနှစ ်မှစ ၍ယခု အထိ ၅ကြိမ် ​ေမြာက် ရှိပါ သည်။ အကျိုး တက်ရောက် မှု၊ ဆွဲဆောင် မှုနှင်.စွမ်းအား ရောက် ရှိ မှု များစွာ ပေါ်ပေါက်ပါသည်။
ယူနမ် ပြည်နယ် အရှေ.တောင်အာရှ တောင်အရှ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ပူးပေါင်း ကော်မတီက ဉီးစီး သော ဌာနနှင်.တာဝန်ယူ သော ဌာန၏ ကိုယ်စား ပြု ၍ပြည်တွင်း ပြည်ပ ကော်ပိုရေးရှင် ကို ဖိတ် ခေါ် အပ်ပါ သည်။ နွေးဦးမြို.သို. လေးစပ် အပ်သော ဧည်.သည် တော် များ တက်ရောက် ပါ ရန် လှိုက်လှဲ စွာ ကြိုဆို ပါ သည်။
အာဆီယံနိုင်ငံ များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရာတွင် ယူနန်ပြည်နယ် ၏ အားသာချက်များ2010-08-12
အာဆီယံသည် တရုတ်နိုင်ငံ ၏ တတိယ အကြီးဆုံး သော သွင်းကုန်လာသော နေရာဖြစ်2010-08-12